Shiinaha Diesel Engine Long Shaft Vertical Turbine Fire Pump warshad iyo soosaarayaasha | Tongke
Mashiinka, wadaha, iyo kantarooleha ayaa lagu rakibay saldhig guud.
Unit Unugga aasaasiga ah ee 'Baseplate unit' wuxuu baabi'inayaa baahida loo qabo sagxado kala duwan oo koriin ah.
Qaybta guud waxay yaraynaysaa baahida loo qabo isku xidhka fiilooyinka iyo isku xidhka.
♦ Qalabku wuxuu ku yimaadaa shixnad isku-dhafan, oo u oggolaanaya oggolaansho dhakhso leh oo fududeynaya rakibidda iyo maaraynta.
System Nidaam loo qaabeeyey oo khaas ah, oo ay ku jiraan agabyo, qalabyo, iyo qaabab la heli karo si loo daboolo qeexitaanka macaamilka.
♦ Si loo hubiyo naqshadeynta
TKFLO Vertical Marawaxadaha Dabka Afaa'iidooyinka:
♦ Iyadoo la adeegsanayo naqshadeynta iyo qaabdhismeedka Haydarooliga ee horumarsan, iyadoo la adeegsanayo nidaamka Ashland si loo sameeyo bidaar jilicsan, iyadoo la adeegsanaayo geeddi-socodka dusha sare ee epoxy, iyo xulashada macquulka ah ee walxaha, waxay awood u siinaysaa mashiinka inuu leeyahay waxqabad aad u fiican iyo nolol dheer.
Sand Qalabka Whirl sand iyo qaab-dhismeedka carrabka u eg ayaa ka dhigaya bacaadka mid aan awood u lahayn inuu galo jihada.
Engines Mashiinnada naaftada ayaa dhammaantood ah badeecado tayo sare leh oo gudaha ama dibedda laga keenay, kuwaas oo leh astaamo dabeecad wanaagsan oo bilow ah, awood xoog leh oo xad dhaaf ah, qaab dhismeed adag, ku habboon dayactirka, si fudud loo isticmaali karo, isla markaana aad u otomaatig ah.
Qaybaha Tumpke Pump Fire Pump, Nidaamyada, iyo Nidaamyada Baakadeysan
Ku rakibida TONGKE Pump Pump (UL waa la ansixiyay, Raac NFPA 20 iyo CCCF) waxay gaarsiiyaan kahortaga dabka xarumaha aduunka oo dhan. TONGKE Pump waxay bixineysay adeeg dhameystiran, laga bilaabo caawinaada injineernimada ilaa been abuurka guryaha ilaa bilowga garoonka. Alaabooyinka waxaa loogu talagalay xulasho balaaran oo bambooyin ah, wadayaal, kontaroolo, taarikada saldhigga iyo qalabyada. Xulashada bambooyinku waxaa ka mid ah bambooyin dabka oo jiif ah, oo saf ah iyo dhammaad ah iyo sidoo kale matoorrada marawaxadaha taagan.
Moodooyinka jiifka ah iyo kuwa toosanba waxay bixiyaan karti ilaa 5,000 gpm. Moodooyinka nuugista dhammaadka waxay gaarsiiyaan awoodda 2,000 gpm. Unugyada khadka ku jira waxay soo saari karaan 1,500 gpm. Madaxu wuxuu u dhexeeyaa 100 ft ilaa 1,600 ft oo leh 500 mitir. Bambooyinku waxay ku shaqeynayaan matoorro koronto ku shaqeeya, matoorada naaftada ah ama matoorrada uumiga. Bambooyinnada dabka ee caadiga ah waa bir bir ah oo Ductile ah oo leh qalab naxaas ah. TONGKE waxay siisaa qalabka iyo qalabyada ay ku talisay NFPA 20.
Codsiyada way ku kala duwan yihiin kuwa yaryar, korontada aasaasiga ah ee korontada loo wado mishiinka naaftada lagu wado, nidaamyada la baakadeeyay. Cutubyada caadiga ah waxaa loogu talagalay inay maareeyaan biyaha macaan, laakiin qalab gaar ah ayaa loo heli karaa biyaha badda iyo codsiyada dareeraha ah ee gaarka ah.
Mashiinnada Dabka ee TONGKE waxay siinayaan waxqabad heer sare ah Beeraha, Warshadaha Guud, Ganacsiga Dhismaha, Warshadaha Awoodda, Difaaca Dabka, Dowladda Hoose, iyo Codsiyada Nidaamka.
Waxaad go'aansatay inaad yareyso halista waxyeellada dabka ee xaruntaada adigoo ku dhejinaya nidaamka bamka dabka ee UL, ULC. Go'aankaaga xiga waa nidaamka aad iibsanayso.
Waxaad dooneysaa bamka dabka oo lagu caddeeyo rakibidda adduunka oo dhan. Waxaa soo saaray xirfadlayaal khibrad balaaran u leh hanaanka dabka. Waxaad rabtaa adeeg dhameystiran oo ku saabsan bilowga garoonka. Waxaad rabtaa Bamka TONGKE.
Bixinta Xalal Bambooyin TONGKE Way Kuufin Kartaa Adiga Shuruudaha:
Awoodda been-abuurka ee guriga oo dhammaystiran
Awoodda tijaabada ee farsamaysan ee leh macaamiisha qalabaysan ee dhammaan heerarka NFPA
Moodooyinka gaagaaban ee awooda ilaa 2,500 gpm
Moodooyinka taagan ee awooda ilaa 5,000 gpm
Moodooyinka khadka ku jira ee awooda illaa 1,500 gpm
Dhammee moodooyinka nuugista ee awooda illaa 1,500 gpm
Wada: matoor koronto ama mishiin naafto ah
Unugyada aasaasiga ah iyo nidaamyada la baakadeeyey.
Unugyada Bamamka Dabka & Nidaamyada Baakadeysan
Electric Motor Drive iyo Diesel Engine Drive bambooyin dab ayaa loo diyaarin karaa iskudhaf kasta oo bambooyin, wadayaal ah, kontaroolada iyo qalabyada loogu talagalay codsiyada adeegga dabka ee ku qoran iyo kuwa la ansaxiyay. Unugyada xirmooyinka iyo nidaamyada ayaa hoos u dhigaya qiimaha rakibidda mashiinka dabka waxayna bixiyaan kuwaas
Si loo buuxiyo talooyinka heerarka Ururka Qaranka ee Dabka Difaaca sida lagu daabacay Qoraalkooda 20, daabacaadda hadda, qalab gaar ah ayaa looga baahan yahay dhammaan rakibidda bamka dabka. Waxay kala duwanaan doonaan, si kastaba ha noqotee, si ay ugu habboonaadaan baahiyaha shaqsi kasta rakibaadda iyo shuruudaha maamulka caymiska deegaanka. Tongke Pump waxay bixisaa noocyo badan oo rakibidda mashiinka dabka ah oo ay ka mid yihiin: kororka dheecaanka isku-dhafan, korantada gargaarka, dabacsanaanta wax-soo-saaraha, kordhinta dheecaanka dheecaanka, koorta xad-dhaafka ah, madaxa waalka, tuubbada tuubbada, daboolka tuubbada iyo silsiladaha, nuugista iyo cabbiraadaha dareeraha, waalka gargaarka, waalka sii deynta hawada otomaatiga ah, mitirka socodka, iyo waalka faleebada faleebada. Si kasta oo ay yihiin shuruudaha, Sterling wuxuu leeyahay xariijin dhameystiran oo qalab ah oo la heli karo waxayna qancin kartaa shuruudaha rakibid kasta.
Jaantusyada hoos lagu soo saaray waxay si muuqaal ah u muujinayaan qalabyada badan iyo sidoo kale darawallada ikhtiyaariga ah ee lagu heli karo dhammaan bambooyinnada dabka ee Tongke iyo nidaamyada xirmooyinka leh.
S. Maxaa ka dhigaya mashiinka dab-damiska noocyada kale ee bambooyin?
A. Marka hore, waxay la kulmaan shuruudaha adag ee NFPA Pamphlet 20, Labbarka shaybaarada iyo Shirkadda Cilmi baarista Wadajirka ah ee isku halaynta iyo adeegga aan kala go 'lahayn ee xaaladaha ugu adag uguna baahida badan. Xaqiiqadani kaligeed waa inay sifiican uguhadashaa tayada wax soo saarka TKFLO iyo qaababka naqshadeynta lacagta. Mashiinnada dabka ayaa looga baahan yahay inay soo saaraan xaddiga socodka gaarka ah (GPM) iyo cadaadiska 40 PSI ama ka weyn. Dheeraad ah, hay'adaha kor ku xusan waxay ku talinayaan in bambooyinku ay soo saaraan ugu yaraan 65% cadaadiskaas oo ah 150% qulqulka la qiimeeyay - iyo inta lagu shaqeynayo 15 wiish oo kor u qaadis ah. Wareegyada waxqabadka waa inay ahaadaan sida madaxa xirmidda, ama "qulqulka," wuxuu ka socdaa 101% ilaa 140% madaxa la qiimeeyay, iyadoo kuxiran qeexitaanka hay'adda ee ereyga. Mashiinnada dabka ee TKFLO looma bandhigo adeegga bamka dabka ilaa ay ka soo baxaan dhammaan shuruudaha hay'adaha.
Marka laga soo tago sifooyinka waxqabadka, bambooyinnada dabka ee TKFLO waxaa si taxaddar leh u baaraya labada NFPA iyo FM si loogu kalsoonaan karo iyo nolol dheer iyadoo loo marayo falanqaynta naqshadooda iyo dhismahooda. Daacadnimada dahsoon, tusaale ahaan, waa inay ahaato mid ku habboon u adkeysiga tijaabada hidde-wadaha ee saddex jeer ka badan cadaadiska ugu badan ee hawlgalka iyada oo aan qarxin! Nakhshadda TKFLO ee qaabaysan oo si fiican loo farsameeyay waxay noo oggolaaneysaa inaan ku qancino qeexitaankan qaar badan oo ka mid ah noocyadeenna 410 iyo 420. Xisaabinta injineernimada ee ku saabsan nolosha nolosheeda, culeyska batarka, leexinta usheeda dhexe, iyo cadaadiska xiirida waa in sidoo kale loo gudbiyaa NFPA. iyo FM waana inay ku dhacaan xadka muxaafidka ah si loo hubiyo kalsoonida ugu weyn. Ugu dambeyntii, ka dib marka la buuxiyo dhammaan shuruudaha hordhaca ah, mashiinku wuxuu diyaar u yahay imtixaanka shahaadeynta kama dambaysta ah si ay goobjoog uga ahaadaan wakiillo ka socda UL iyo FM Performance waxay u baahan doonaan in dhowr dhexroor impeller la soo bandhigi doono si lagu qanco, oo ay ku jiraan ugu yar iyo ugu badnaan, iyo dhowr ah u dhexeeya.
Q. Waa maxay waqtiga hogaaminta caadiga ah ee bamka dabka?
A. Waqtiyada hogaaminta caadiga ah waxay soconayaan 5-8 toddobaad laga bilaabo marka la soo saaro amar. Faahfaahin naga soo wac.
Q. Waa maxay habka ugu fudud ee lagu ogaan karo wareegga bamka?
A. Gawaarida dabka kala-baxa ah, haddii aad ku fariisato matoorka u jeeda bamka dabka, bartaas hadda ka dib bambooyuhu waa midig, ama saacad-caqli-gal ah, haddii nuugitaanku ka imanayo midig iyo dheecaan wuxuu u socdaa dhanka bidix. Ka soo horjeedka ayaa run u ah bidix-bidix, ama wareeg-saacad-wareeg ah. Furaha ayaa ah barta ugu dambeysa ee laga hadlayo markii laga hadlayo mowduucan. Hubso in labada dhinacba ay ka fiirsanayaan godka mashiinka isku hal dhinac.
S. Sidee loo cabiraa matoorada iyo matoorrada bambooyinnada dabka?
A. Matoorrada iyo matoorada la siinayo matoorrada dabka ee TKFLO waa la qiyaasayaa sida ay qabaan UL, FM iyo NFPA 20 (2013), waxaana loogu talagalay in ay ku shaqeeyaan meel kasta oo ka mid ah qalooca bamka dabka iyada oo aan laga dhaafin qeybta adeegga magaca, ama cabirka mishiinka. Ha ku kadsoomin inaad u maleyneyso in matoorrada ay cabbirkoodu yihiin oo keliya 150% awoodda magaca. Ma aha wax aan caadi ahayn in bambooyinnada dabka ay si fiican u shaqeeyaan wax ka badan 150% inta lagu qiimeeyay awoodda (tusaale ahaan, haddii uu jiro biyo furan ama tuubbo jaban oo ka hooseysa).
Wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan tixraac NFPA 20 (2013) sadarka 4.7.6, UL-448 sadarka 24.8, iyo Heerka Ansixinta ee Warshadda ee Burburka Kiisaska Kala-baxa, Fasalka 1311, cutubka 4.1.2. Dhammaan matoorrada iyo matoorada la siinayo matoorrada dabka ee TKFLO waxaa loo qiyaasayaa ujeeddada dhabta ah ee NFPA 20, UL, iyo Factory Mutual.
Maaddaama matoorrada mashiinka dabka aan la fileynin inay si isdaba joog ah u sii socdaan, badanaa waa la cabbiraa si looga faa'iideysto 1.15 qodob oo ah adeegga adeegga. Markaa si ka duwan biyaha guryaha ama codsiyada bamka HVAC, matoorka mashiinka dabka mar walba laguma cabbiro "aan culeys badneyn" oo ku baahsan qalooca. Ilaa iyo intaadan ka dhaafin qaybta adeegga 1.15, waa la oggol yahay. Marka laga reebo tan waa marka la isticmaalo mashiinka korantada ku shaqeeya xawaaraha isbeddelaya.
Q. Miyaan u isticmaali karaa wareegga mitirka qulqulka baddalka cinwaanka imtixaanka?
A. Wareegga mitirka qulqulka badanaa waa mid ficil ah halka qulqulka biyaha xad dhaafka ah ee loo yaqaan 'UL Playpipe nozzles' aan habooneyn; si kastaba ha noqotee, markaad isticmaaleysid aaladda mitirka socodka xiran ee ku wareegsan bamka dabka, waxaa laga yaabaa inaad tijaabiso matoorrada waxqabadka Haydarooliga, laakiin MA AAD tijaabineyso bixinta biyaha, taas oo ah qayb muhiim u ah nidaamka bamka dabka. Haddii ay carqalad ku tahay bixinta biyaha, tani kama muuqan doonto wareegga mitirka socodka, laakiin waxaa hubaal ah in lagu soo bandhigi doono iyadoo la tijaabinayo mashiinka dabka oo leh tuubbooyin iyo Playpipes. Bilowga hore ee nidaamka bamka dabka, waxaan marwalba ku adkaysano biyo qulqulaya nidaamka si loo hubiyo sharafta nidaamka oo dhan.
Haddii wareegga mitirka socodka lagu soo celiyo biyaha - sida haanta biyaha ee dhulka ka sarreysa - markaa nidaamkaas waxaad awoodi doontaa inaad tijaabiso bamka dabka iyo biyaha. Kaliya iska hubi in mitirka socodkaagu si habboon loo qaabeeyey.
Q. Miyaan u baahanahay inaan ka walwalo NPSH codsiyada bamka dabka?
A. Marar dhif ah. NPSH (madaxa nuugida wanaagsan ee saafiga ah) waa tixgelin muhiim ah oo ku saabsan codsiyada warshadaha, sida quudinta kuleelka ama bambooyin biyo kulul. Mashiinnada dabka, si kastaba ha noqotee, waxaad kula macaamileysaa biyo qabow, oo u adeegsada dhammaan cadaadiska jawiga si ay kaaga faa'iideystaan. Mashiinnada dabka waxay u baahan yihiin "nuugid daadad leh," halkaasoo ay biyuhu ku soo gaadhaan mashiinka mashiinka ka buuxiya iyada oo loo marayo culeyska. Waxaad u baahan tahay tan si aad u dammaanad qaaddo bamka ugu sarreeya ee 100% waqtiga, si marka aad dab kacdo, mashiinkaaga uu u shaqeeyo! Xaqiiqdii waa suurtagal in lagu rakibo bamka dabka oo leh wiishka lugta ama waxyaabo macmal ah oo loogu talagalay horudhaca, laakiin ma jirto wado lagu damaanad qaadi karo 100% in bamka uu si sax ah u shaqeyn doono markii loogu yeero inuu shaqeeyo. Meelo badan oo laba-labo ah oo bambooyin nuugid ah, waxay kaliya qaadataa ugu yaraan 3% oo hawo ah mashiinka mashiinka si looga dhigo mashiinka aan shaqeyn karin. Sababtaas awgeed, ma heli doontid soo saaraha mashiinka dab-damiska oo doonaya inuu halis ugu jiro iibinta mashiinka dabka wixii rakibid ah oo aan dammaanad ka qaadi doonin "nuugista daadadka" mashiinka dabka mar walba.
S. Goorma ayaad ka jawaabi doontaa su'aalaha badan ee ku saabsan boggan Su'aalaha la Weydiiyo?
A. Waan ku dari doonaa iyaga markay arimuhu yimaadaan, laakiin waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto su'aalahaaga!
Hore: API610 ANSI Habka Kiimikada Halbeegga Shidaalka Shidaalka Ceyriin ee Shidaalka Petrochemical
Xiga: LDP Taxanaha Hal-Mar-dhamaadka Nuugista Biyo-nadiifiyaha Biyo saafi ah
Awood 20-1400 m3/ h
Madaxa 3-180 mitir
Cadaadis Shaqo ilaa 2.0Mpa
Dhexroor DN 25-400 mm
Dareeraha biyo nadiif ah ama dareeraha jirka iyo kiimikada Biyaha dhexdhexaadka ah, PH = 6.5-8.5, maadada ion chloride = 400mg / l, heerkul dhexdhexaad ah oo ka yar 40 ℃
Xawaaraha saar 1000-3600 RPM
Mashiinka Cummins, Deutz, Perkin ama nooc kale oo Shiinaha ah
Bowl: Bir bir ah, Bir aan xadi lahayn
Shaft: Bir aan xadi lahayn
Dareere: Bir bir ah, Naxaas ama Bir aan lahayn
Dheecaan madaxa: Birta tuur ama birta kaarboon
Waxaa badanaa loo isticmaalaa biyaha dabka ee petrochemical, gaaska dabiiciga ah, warshad koronto, suufka cudbiga, wharf, duulista, bakhaarka, dhismaha sare u kaca iyo warshadaha kale. Waxay sidoo kale codsan kartaa markabka, taangiga badda, markabka dabka iyo munaasabadaha kale ee sahayda.
Nooca nuugista dhamaadka marxaladda hal nuuca NFPA ...
Multistage Dabka saar Qalabka ahama Steel ...